2012-03-25 ~ Myanmar Express
ဘုရားသားတော်တွေကို ပါဒေါ်စု တရားဟောနေပြီ
ပဏ္ဏိတာရာမရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ရိပ်သာ (၂၂)ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း မှ ရှင်သာမဏေများ နှင့် သိက္ခာရှင်များကို ဒေါ်စုမှ အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်း ဟောပြော
သားများကိုရင်ဝတ်လျှင် မိဘများမှတောင် ရှိခိုးကန်တော့ရသည်။ ပုထုဇဉ်လူများ၏ ကျင့်ဝတ်သည် ဘုရားသားတော်များ စောင့်ထိန်းရသော ကျင့်ဝတ်ထက် သာပါ့မလား။ ပုထုဇဉ်ထက် မြင့်မြတ်သော ရှင်သာမဏေများက ကြမ်းပေါ်တွင်ထိုင်၍ အမျိုးသမီးများကို မော်ကြည့်နေရခြင်းသည် သင့်တော်ပါ့မလား။ Myanmar Express Read More
မြောက်ကိုရီးယားတို့ တာတိုပစ် ဒုံးကျည် နှစ်စင်း စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်ခဲ့
From :MRTV-4 မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ မြေပြင်မှ သင်္ဘောသို့ ပစ်ခတ်သည့် တာတိုပစ် ဒုံးကျည် နှစ်စင်းကို ကိုရီးယား ကျွန်းဆွယ် အနောက်ဘက်ရှိ ပင်လယ်ဝါသို့ စမ်းသပ် ပစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်း NHK သတင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယား အစိုးရ သတင်း အရင်းအမြစ်များမှ ပြော့ရာတွင် မြောက်ကိုရီးယားမှ ပစ်လွှတ်သည့် ဒုံးကျည် နှစ်စင်းမှာ နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ခရိုင် တစ်ခုတွင် ရှိနေသော အခြေစိုက် စခန်းမှ ကြာသပတေးနေ့ နံနက်ပိုင်းက ပစ်လွတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ အဆိုပါ KN-01 သင်္ဘောဖျက် ဒုံးကျည်မှာ ကီလိုမီတာ ၁၂၀ အကွာအဝေး အထိ ပစ်ခတ်နိုင်ကြောင်းလည်း အမည်မဖော်လိုသူ အဆိုပါ သတင်းအရင်းအမြစ် အရ သိရသည်။ ယခုလို ပစ်လွှတ်မှုမှာ လာမည့် လတွင် ပြုလုပ်မည့် ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်မှု အစီအစဉ်နှင့် ဆက်စပ်မှု့ ရှိပုံ မရကြောင်း အဆိုပါ လူမှပြောသည်။ တောင် ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ မြောက်ကိုရီးယားတို့ အနေဖြင့် တာဝေးပစ် ဒုံးကျည်ကို စမ်းသပ်ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ယုံကြည်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယခုလို တာတိုပစ် ဒုံးကျည်ကို စမ်းသက်ခြင်းမှာ သင်္ဘောဖျက် လက်နက်များ၏ ပစ်နိုင်အားကို စမ်းသပ်ချင်၍ြ်ဖစ်နိုင်ကြောင်းလည်း အဆိုပါ သတင်း အရင်းအမြစ်မှ ပြော သည်။ စောင့်ကြည့်သူများမှ ပြောရာ၌မူ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ တောင်ကိုရီးယား နှင့် အမေရိကန်တို့ကို သတိပေးရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ source : NHK news Myanmar Express
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲဆန္ဒရှင် ခြောက်သန်းကျော်ရှိ
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက စိတ်ဝင်တစား အကဲခတ်နေသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒနယ် ၄၅ နေရာအတွက် မဲပေးနိုင်မည့် မဲဆန္ဒရှင် ခြောက်သန်းလေးသိန်းကျော် ရှိသည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၃၇ နေရာအတွက် မဲပေးနိုင်သူ ၄,၆၈၂,၀၄၀ ဦး ရှိမည်ဖြစ်ကာ အမျိုးသား လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက စိတ်ဝင်တစား အကဲခတ်နေသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒနယ် ၄၅ နေရာအတွက် မဲပေးနိုင်မည့် မဲဆန္ဒရှင် ခြောက်သန်းလေးသိန်းကျော် ရှိသည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ၃၇ နေရာအတွက် မဲပေးနိုင်သူ ၄,၆၈၂, ၀၄၀ ဦး ရှိမည်ဖြစ်ကာ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ခြောက်နေရာအတွက် ၁,၆၆၉,၁၉၂ ဦးရှိကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေများအတွက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၁၃၃,၃၃၀ ရှိပြီး လွှတ်တော်သုံးရပ်အတွက် စုစုပေါင်း ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၆,၄၈၄,၅၆၇ ဦးရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။ ၂၀၁၂ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းကို မတ်လ ပထမပတ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူများ မဲစာရင်းတွင်မပါဝင်ခြင်း၊ မဲပေးခွင့်မရှိသူများ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်နေခြင်းများ၊ သေဆုံးပြီးသူများ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်နေခြင်း စသည့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ မဲစာရင်း မှားယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး မဲစာရင်းများကို မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ထိ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားတဲ့ ကုလားတွေ
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အမေရိကန်နှင့် နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ ရောက်ရှိ
မြန်မာနိုင်င၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံသားများသာမက ပြည်ပနိုင်ငံများကပါ အထူးစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲထက်ပင် စိတ်ဝင်စားနေကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ ယခင်ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ခဲ့သည့် NLD ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲဝင်၍ ဖြစ်မည်ဟု ဆိုနေကြသည်။ မြန်မာအစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့များကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ကြည့်ရှုလေ့လာရန် ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ EU နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး အကြီးအကဲရုံးက ဥရောပသမဂ္ဂ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကို စေလွှတ်မည်ဟု ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်သည်။ အလားတူပင် အာဆီယံကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကမူ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ အိန္ဒိယ၊ သြစတြေးလျနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကလည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ ရောက်လာကြပြီး ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်က စောင့်ကြည့်မည့်အဖွဲ့ ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် အမေရိကန်က ပြောသည်က ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်သည်ဆိုသည့် အဆင့်မှာ မရှိကြောင်း၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုလျှင် မြန်မာအစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် ရက်ပိုင်းအလိုမှာမှ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့၍ ကုလသမဂ္ဂက ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး အချက်တွေနှင့်အညီ စစ်ဆေးနိုင်မည် မဟုတ်၍ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဧပြီ ၁ ရက် ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်သည့် ကာလမှာ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံက ကိုယ်စားလှယ်များသည် မြန်မာပြည်သို့ စောင့်ကြည့်ရန် ရောက်နေကြကြောင်းသိရှိရသည်။
ကြိုက်တဲ့ ပါတီကို မဲပေးနိုင်ပါသည် ၊ သို့သော်.......
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်း စနစ်တကျ ပြုစုတင်ပြကြရန် အသိပေးနှိုးဆော်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေ အခန်း (၁၃)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံသုံးစွဲကြမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ် စာရင်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စနစ်တကျ စာရင်းပြုစု၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက မဲဆန္ဒအလိုက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်ကို ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း နေပြည်တော်/ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ကော်မရှင်ညွှန်ကြားချက် (၃/၂၀၁၀) ၏ ပူးတွဲ(က)ပါ သတ်မှတ်ပုံစံအတိုင်း ပေးပို့တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံရသည်ဖြစ်စေ၊ အရွေးမခံရသည်ဖြစ်စေ ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ် စာရင်းတင်ပြရန် တာဝန်ရှိပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း စနစ်တကျ တင်ပြခြင်းမရှိပါက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်တို့သည် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၈၈(ဂ) အရ အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းသူအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ကြေညာခြင်း ခံရနိုင်ကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ၁၆.၉.၂၀၁၀ ရက်စွဲပါ ညွှန်ကြားချက် (၃/၂၀၁၀)နှင့် ပူးတွဲ(က) သတ်မှတ်ပုံစံများအား ၁၈.၉.၂၀၁၀ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
Eleven Media Group သို့ ပြည်သူတစ်ဦးမှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
EMG ဆိုတဲ့ Eleven Media Group က အငယ်ထွေးဆိုတဲ့ ဆောင်ပါးရှင်က ဘာသဘော
နဲ့ရိုဟင်ဂျာလို့ သုံးပြီးရေးထားသလဲတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။သူရဲ့တထွာတမိုက်ဦးနှောက်က
တရုတ်ရဲမကောင်းတာကို ဦးစားပေးရေးချင်နေတာ ပေါ်လွင်ပေမယ့် "ရိုဟင်ဂျာ မောင်းတော
မှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားတာ...." ဆိုတာကတော့ မေးစရာရှိပါတယ်။ဒီစကားရဲ့ဆိုလိုရင်းက ရိုဟင်ဂျာ
သည်မှတ်ပုံတင်ရှိသည်၊ရိုဟင်ဂျာသည် နိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီ ဆိုတဲ့ ဆိုလိုချက်ကို သွားသက်ရောက်စေပါတယ်။
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ဆိုတဲ့ Eleven က Chairman & CEO ကိုမေးစရာရှိပါတယ်။ခင်ဗျားရဲ့ပေါ့လျော့မူတစ်ခုက
အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားစေနိုင်မလဲဆိုတာ နားလည်ပါရဲ့လား?
မသိနားမလည်ေ၀၀ါးဝါး ဖြစ်နေသူအတွက် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ တိုင်းရင်းသားလား၊နိုင်ငံသားလား Confuse ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
တကယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်မျိုး ရှိနေခဲ့ပါစေ...နိုင်ငံတော်ကရော၊တိုင်းရင်းသားအားလုံးက တရားဝင်အတိအလင်းမရှိပါဘူး၊
မဟုတ်ပါဘူး လို့ကြေငြာထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို တကယ်ချစ်ရိုးမှန်ရင် ဒီလို မလုပ်သင့်ပါဘူး၊
ထမင်းတနပ်အတွက် အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့။နာမည်ကျော်ကြားထင်ပေါ်လိုမူနဲ့ အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့။ဗုဒ္စ ဘာသာ နဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်
မျက်နှာကို ပေါ်ပင်လုပ်လိုစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မနင်းချေလိုက်ပါနဲ့ ဒေါက်တာကြီး။Myanmar Express Read More
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရှင်းလင်း
From : ခေတ်လူငယ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှုများ၊ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတ သည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး မီဒီယာများ၏မေးမြန်းမှု များ ကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ မဲရုံအတွင်းသို့ မီဒီယာများ သတင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ မီဒီယာ တစ်ခုက မေးမြန်းခဲ့ရာ ''မဲရုံအတွင်းကိုတော့ မီဒီယာတွေ ၀င်ခွင့်မရှိပါဘူး။ မဲရုံပြင်ပကနေပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့်၊ သတင်း မေးမြန်းခွင့် ရှိပါတယ်။ မဲရုံအတွင်းကိုတော့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲ ၀င်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေနဲ့လည်း မဲရုံထဲကို စကားပြောစက်၊ ကင်မရာ၊ ဖုန်းတွေ ယူနိုင်သော်လည်း သုံးစွဲခွင့် မပြုထားပါဘူး'' ဟု ပြည်ထောင်စုေ ရွးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက် ၍လည်း ''လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့၊ မဲစာရင်း တိကျမှန်ကန်ဖို့ အလေးထား ပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ၀န်ကြီးဌာန အသီးသီးက ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးတွေ၊ ပြည်ထောင်စုဒုတိယ၀န်ကြီးတွေကို ဖိတ်ကြားပြီး မဲပေးရာမှာ ဘက်လိုက်ခြင်း မပြုဖို့နဲ့ ဥပဒေနဲ့အညီ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ခုကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၇ ခုက ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၀ ဦး၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို လာရောက်လေ့ လာဖို့ ပြည်ပက လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ ၁၅၀ ကျော်ကိုလည်း ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။ အောင်မြင်ပြီး လွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ ယခင်ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံတွေထဲက ကောင်းတာတွေယူပြီး မကောင်းတာတွေပြင်ပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ကိုယ်စား လှယ်တွေအနေနဲ့လည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တာတွေ တွေ့ရင် ကော်မရှင်ကို ချက်ချင်း တိုင်နိုင်ပါတယ်'' ပြောကြားခဲ့သည်။ မဲဆွယ် စည်းရုံးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ဓာတ်ပုံအား သုံးစွဲနေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထောက် တစ်ဦး၏ မေးမြန်းမှုကိုလည်း ''သမ္မတကြီးရဲ့ ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြုပြီး မဲဆွယ်တာကို ဖြေကြားရမယ် ဆိုရင်တော့ ဒါကတော့ အဖြစ်မှန်ပဲလေ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အငြင်းမပွားလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သမ္မတကြီးပုံနဲ့ စည်းရုံးတာကိုတော့ ဘာမှမပြောလိုပါဘူး'' ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ နယ်မြေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိ၍ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်တော့သည့် ဖားကန့်၊ ဗန်းမော်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်များတွင်လည်း ကျင်းပနိုင်သည့် အခြေအနေရှိပါက ချက်ချင်း ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ Myanmar Express Read More
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း အစီအစဉ် ပြောင်းလဲခြင်း
From : ခေတ်လူငယ်မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် ၁-၄-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းစနစ်အား ဈေးကွက်အခြေခံသော ထိန်းကျောင်းမှုရှိသည့် နှုန်းရှင်ငွေလဲလှယ်နှုန်းစနစ် (Managed Floating Exchange Rate Regime) ကို စတင်ကျင့်သုံးမည် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံသုံးငွေကြေး မြန်မာကျပ်၏ တန်ဖိုးအား နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရာတွင် ယင်းနေ့မှစ၍ နိုင်ငံခြားငွေဈေးကွက်ရှိ ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအား အခြေအနေများအရ သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း စနစ်သစ်နှင့်အညီ ရည်ညွှန်း နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း (Reference Foreign Exchange Rate) ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်မှ နေ့စဉ် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီးပွားရေးစနစ်အား ခေတ်မီစေမည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်များ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းများကို ပေါင်းစည်းရန်နှင့် လက်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပေးချေမှုများ၊ ပြည်ပငွေလွှဲပေးပို့မှုများအပေါ် တားမြစ်ချက်များကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖယ်ရှားပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှစ၍ အထူးထုတ်ယူခွင့် (SDR) တစ်ယူနစ်လျှင် ၈ ဒသမ ၅၀၈၄၇ ကျပ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် တရားဝင် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းအား ယခုကဲ့သို့ ဈေးကွက်မှ သတ်မှတ်ပေးသည့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် အစားထိုးခြင်းမှာ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းများအား ပေါင်းစည်းရေးအတွက် ပထမအဆင်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ဈေးကွက်နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းအပေါ် လိုအပ်သလို ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ ရသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း ရေးဆွဲရာတွင် နိုင်ငံတော် စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ နိုင်ငံခြားငွေ အရအသုံးဆိုင်ရာ လျာထားမှုများအား ဈေးကွက်နိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ်နှုန်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေနိုင်သော ခန့်မှန်းနှုန်းထားတစ်ရပ်ဖြင့် တွက်ချက်လျာထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း အစီအစဉ် ပြောင်းလဲမှုများကို ပြည်သူလူထု သိရှိစေရန် ဆက်လက် သတင်းထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ Myanmar Express
မြန်မာစကားမတတ်တဲ့ အမေစု သား နှစ်ယောက် အတုယူစရာ
မြန်မာစကားမတတ်တဲ့ အမေစု သား နှစ်ယောက် အတုယူစရာ လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပေမယ့် တကယ်တော့ မြန်မာစကားတတ်ပြီး မြန်မာအချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်လို့ ပြောတတ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်လည်း အတုယူသင့်ပါတယ်။ မြန်မာစကားကို လေးစားပြီး မြန်မာတွေကြားမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားသားကို ယူပြီး သားတွေကို မြန်မာစကား သင်မပေးတဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်ထက် အများကြီး ပိုသာပါတယ်...။Myanmar Express
နိုင်ငံသားအမည်ခံ ပြည်ပလုပ်ငန်းများအား လုံးဝအရေးမယူဘဲ တရားဝင်ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ရန် ရက် ၉၀ ခွင့်ပြု
From : သတင်း
ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံသားအမည်ခံကာ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီများအား နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူမှု လုံးဝမရှိဘဲ အမှန်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်ရန် ရက်ပေါင်း ၉၀ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ အမိန့်ကြေညာစာအား ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်က စတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ယင်းနေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားက အမည်သာခံပြီး မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုမှ မရှိခြင်း၊ ငွေကြေးထည့်ဝင်မှု လုံးဝမရှိခြင်းဖြစ်ပါက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း နိုင်ငံခြားသားပိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားက မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတို့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားကာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုထားခြင်းဖြစ်ပါက ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း နိုင်ငံခြားသား ပိုက် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတစ်ဦးအား အမွေစား အမွေခံအဖြစ်မွေးစားကာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံသားအတွက် သင့်တင့်သည့် ရှယ်ယာ ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီး ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအဖြစ်လည်းကောင်း ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါရှိရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားရာ ပုံစံပြောင်းလဲ မှတ်ပုံတင်ခြင်းများအားလည်း ထိုအတိုင်းသာ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းမ် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အာရှ ပစိဖိတ် ဒေသကို အမေရိကန် စစ်ရေးယန္တရား ဦးစားပေးမည်
From : သူရိယ(နေရှင်း) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ငွေကြေးအကြပ်အတည်းက ဗျူဟာ အပြောင်းအလဲကို ဖြစ်စေသည်ဟု အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး အတွင်းရေးမှူး လီယွန် ပန်နက်တာက ဗျူဟာများ ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် နိဒါန်းတွင် ပြောဆိုသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို သမ္မတဟောင်း ဂျော့ဘုရ်ှက သံတမန်နှင့် စစ်ရေး အရေးယူဆောင်ရွက်များ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် အီရတ်ရှိ စစ်ပွဲများက အမေရိကန်စစ်တပ်ကို မောပန်းစေသကဲ့သို့ ငွေကြေးရင်းမြစ်ကို ပိုမိုကုန်ကျစေခဲ့ပြီး အီရတ်နှင့် အာဖဂန်မှ စစ်တပ်များ ဆုတ်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ စစ်တပ်များ ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်အတူ အမေရိကန် စစ်ရေးနည်းဗျူဟာက ကမ္ဘာတ၀န်း အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး နည်းဗျူဟာကို အဆုံးသတ်စေခဲ့သည်။
ကြပ်တည်းလာသည့် စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေး အသုံးစရိတ်အကြား မျှတအောင် ၀ါရှင်တန် ကြိုးစားနေမှုကိုလည်း ထင်ဟပ်စေခဲ့ သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်က အမေရိကန် စစ်ရေး အသုံးစရိတ်သည် အဆမတန် မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏ စစ်ရေး အသုံးစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကလည်းလည်း ဒေါ်လာ ၁၅ ထရီလီယံ အကြွေးတင်နေသည်။
အမေရိကန်၏ ငွေကြေးလိုငွေပြမှုနှင့် အကြွေးပြဿနာသည် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟုလည်း ပန်နက်တာက ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။
လာမည့် ရာစုနှစ်တွင် အမေရိကန်က ဒေါ်လာ ၄၈၉ ဘီလီယံ စစ်ရေး အသုံးစရိတ်ဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။
အခြေစိုက် မြေပြင်တပ်များကို လျော့ချနေသော်လည်း အရည်းအသွေးများက အနာဂတ် အောင်မြင်မှုများနှင့် ဆိုက်ဘာကို လွမ်းမိုထားနိုင်ခြင်းတို့ကို အလေးအနက်ထားသွားမည်ဖြစ်သည်။
“လျင်မြင်ဖျတ်လတ် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့ ခြိမ်းခြောက်တာတွေအတွက် အသင့်ရှိနေတဲ့ ပထမတန်းစား တပ်ဖြစ်ဖို့ အမေရိကန်က ထိန်းသိမ်းထားရမယ်” ဟု အိုဘားမားက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယခင်က အမေရိကန်က စစ်ပွဲ ၂ ပွဲကို တပြိုင်တည်း တိုက်ခိုက်နိုင်သည့် အရည်အချင်းကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းထက် အဓိက စစ်ပွဲတခုကို တိုက်ခိုက်ပြီး တခြား တခုကို ဟန်တိုင်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျက်ရှိသည်။
ဗျူဟာက ပြန်လည်သုံးသပ်မှုက အမေရိကန်၏ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တည်ရှိမှုကို ပြန်လည် စဉ်းစားနေသည့် ညွန်းဆိုချက် တခုဖြစ်စေခဲ့သည်။
အမေရိကန်၏ စိန်ခေါ်ချက် ၅ ခုကို ပန်နက်တာက စာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ အစွန်းရောက် ၀ါဒ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပျက်စီးစေနိုင်သည့် လက်နက်၊ အာရှရှိ နိုင်ငံများ ပေါ်ထွန်းလာမှု၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းပြောင်းလဲမှု၊ တခြားတိုင်းပြည်များ၏ တလွဲအသုံးချမှု တို့ဖြစ်သည်။
ယင်းတို့အနက် ပန်နက်တာက အနာဂတ်တွင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာရှ ပစိဖိတ်သည် အမေရိကန်အတွက် ကြီးမားသည့် ခြိမ်းခြောက်စိန်ခေါ်မှုအဖြစ် ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။
အမေရိကန်ရှိ လူများစုကလည်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းကို အထူးအာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး တခြားသောဒေသ အထူးသဖြင့် အာရှကို လစ်လျူရှုခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်လျက်ရှိသည်။
အာရှပစိဖိတ်ရှိ အမေရိကန်တပ်များ တောင့်တင်းမှုကို အိုဘားမားက အလေးထားပြောကြားသွားသည်။ ငွေကြေး လျော့ချမှုသည် အရေးပါသည့် ဒေသနှင့် မသက်ဆိုင်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ယင်းမှတ်ချက်များက အမေရိကန် စစ်ရေး အာရုံစူးစိုက်မှုက ရှေ့သို့ တိုးတက်လုပ်ဆောင်နေသည့် လက္ခဏာတရပ်ဖြစ်ပြီး တရုတ်၏ ဒေသတွင်းလွမ်းမိုးမှုကို ချိန်ခွင်ရှာညှိရန် ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်ကို ညွန်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျော့ဘုရှ် သမ္မတ သက်တမ်းကာလအတွင်း အမေရိကန်က တနိုင်ငံတည်း သို့ မဟာမိတ်များဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင်ရှိသည်ဟူသော အတွေးအခေါ်ရှိသူများလည်း ရှိနေသည်။
သို့သော်လည်း အိုဘားမားက အမေရိကန်က သူ၏ အဓိက မဟာမိတ်များနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်မှု တိုးမြင့်သွားရန်နှင့် ကမ္ဘာတွင် အမေရိကန် တည်ရှိမှုကို နည်းအသစ်များ တိုးတက်လုပ်ဆောင်ရန် ဖိအားပေးပြောဆိုခဲ့သည်။
ယခင်အတိတ် ဖြစ်ရပ်များကလည်း အမေရိကန်က တိုင်းပြည်ငယ်များ၏ အုပ်ချုပ်သူများကို ဖြုတ်ချရန်အတွက် တောင့်တင်းမှု အလုံအလောက်ရှိနေသည်ကို သက်သေပြလျက်ရှိသော်လည်း ပစ်မှတ်ထားသည့် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှု ရရှိရန် အတွက် အားနည်းချက်ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
၀ါရှင်တန်၏ လစ်ဗျားမူဝါဒကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမေရိကန်က ရည်းမှန်းချက်ကို ရရှိရန် မဟာမိတ်များ၏ ပူးပေါင်းမှုကို လိုအပ်သည်ဟု ထင်ရှားစွာ ညွန်ပြလျက်ရှိသည်။
အလားတူ အမေရိကန်က နေတိုးကို ဥရောပတွင် ပိုမို ကျယ်ပြန့်သည့် ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ရန်လည်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။ လက်တင် အမေရိကနှင့် အာဖရိကတွင် အမေရိကန် တည်ရှိမှုကို နည်းလမ်းအသစ် အသုံးပြု စီစဉ်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဗျူဟာအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်သစ်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် အတောင့်တင်းဆုံးစစ်တပ်ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ချေ။
အမေရိကန်၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သော ကမ္ဘာထိပ်တန်းနေရာကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဟူသော ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက် တခုလည်း ဖြစ်သည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းများကို ဂြိုလ်တုမှ သတင်းရယူခြင်း
From : ခေတ်လူငယ်ဆောင်ရွက်လိုသော သတင်းဌာနများ ဂြိုလ်တုမှ သတင်း ပေးပို့/ရယူနိုင် ၁.၄.၂၀၁၂ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းများကို ဂြိုလ်တုမှ သတင်းရယူခြင်း (SNG; Satellite News Gathering) ဆောင်ရွက်လိုသော သတင်းဌာနများအတွက် နေပြည်တော် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရုံး၊ မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား (တပ်ကုန်း)နှင့် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား (ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်) စသည့် (၃) နေရာမှ Thaicom-5 ဂြိုလ်တုသို့ Satellite Uplink လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းပေးပို့လိုသော သတင်းဌာနများသည် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားထံ Booking Time လျှောက်ထား၍ သတ်မှတ်အခကြေးငွေ ပေးပြီး Uplink ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ- ၀၆၇-၇၉၄၇၁၊ ၀၆၇-၇၉၄၇၄၊ Fax; ၀၆၇-၇၉၄၇၃၊ ၀၆၇-၇၉၄၆၄ ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ Myanmar Express
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ကြီး သစ်ထူးလွင်(ခ)သစ်ထူးလိမ် ညာတယ်
မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန
ရုံး ပြတင်းပေါက်မှ ရှမ်းအမျိုးသမီး မနန်းဝိုးဖန် ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားကြောင်းသိ
ရှိရသည်။အထိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သတ်၍ ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများမှ
မနန်းဝိုးဖန် သေဆုံးရသည့်ဖြစ်စဉ်မှာ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ နေ့ည မနားတမ်း
စစ်ဆေးနေသောကြောင့် မနန်းဝိုးဖန် မှာ စစ်ဆေးမူဒဏ်များကို မခံနိုင်တော့သဖြင့်
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားခဲ့ကြောင်းသတင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိနေရ သည်။
သေဆုံးသွားသူ မနန်းဝိုးဖန် သေဆုံးသူ မနန်းဝိုးဖန် မှာနဂိုကတည်းက သွေးပေါင်ကျရောဂါအခံရှိကြောင်း
သိရှိရသည်။ယခု သေဆုံးသွားသည့်ဖြစ်စဉ်မှာလည်း မနန်းဝိုးဖန် သည် (စစစ) မှ နေ့ည
စစ်ဆေးနေသောကြောင့်မခံနိုင်၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခုန်ချ သတ်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲ
ပြတင်းပေါက်အနီးမှ မူးလဲ၍ပြုတ်ကျကာ သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်။
သေဆုံးသူ၏ ရှေ့နေ မအိအိအောင် ပြောကြားချက်
သူရဲကောင်းများ ထွန်းကားသည် (ကျော်သူ၊ ဇင်ဝိုင်း နှင့် အခြားသရုပ်ဆောင်များ)
အကယ်ဒမီ ပေးပွဲမှာပါ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ဒေါ်စုကြည်
အကယ်ဒမီ ပေးပွဲမှာပါ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် မှတ်တမ်းတင်နေသူ
"ပန်းများနှင့်ကျွန်မ" ဇတ်ကားမှ ဒေါ်စုကြည်
"ကိုကို ကျွန်မကို ချာတိတ်လုိ့မခေါ်နဲ့"ဇတ်ကား
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် သတိပြုရမည့် တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှု ၁၂ ချက်
(က) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဖြစ်စေ၊ ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်ကဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့ တစ်ဦးဦး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခြားသူတစ်ဦးဦးက ဖြစ်စေ
(၁) လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုပြုလုပ်ခြင်း၊
(၂) ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို အနှောင့်အယှက် ပြုလုပ်ခြင်း၊
(၃) သူတစ်ပါး အယောင်ဆောင်ခြင်း၊
(၄) မဟုတ်မမှန် ပြောဆို ကြေညာခြင်း၊
(၅) မဟုတ်မမှန် ၀န်ခံလက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း။
(ခ) မဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲများကို တစ်ချိန်တည်း ကျင်းပစဉ် တစ်နယ်ထက်ပိုသော မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား အကျိုးရှိစေခြင်း။
(ဂ) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က သော်လည်းကောင်း၊ ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်က သော်လည်းကောင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မညီညွတ်သော အသုံးစရိတ်များ ကျခံသုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းသို့ ကျခံသုံးစွဲရန် သဘောတူညီခြင်း၊
(ဃ) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် ငွေစာရင်းများကို ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်က သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ရေးမှတ်ထားရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(င) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်၏ တိုက်တွန်းချက်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း-
(၁) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ပါဝင်ရန် သို့မဟုတ် မပါဝင်ဘဲနေရန် သို့မဟုတ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ချက်ဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူက လာဘ်လာဘ လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် လာဘ်လာဘလက်ခံရန် သဘောတူခြင်း၊
(၂) ဆန္ဒမဲပေးရန် သို့မဟုတ် ဆန္ဒမဲမပေးဘဲနေရန် မဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးဦးကို သွေးဆောင်ရန်ဖြစ်စေ၊ သွေးဆောင်လိုသဖြင့် အားထုတ်ရန်ဖြစ်စေ တစ်ဦးတစ်ယောက်သောသူက မိမိအတွက် သို့မဟုတ် သူတစ်ပါးအတွက် လာဘ်လာဘ လက်ခံရန် သဘောတူခြင်း။
(စ) မမှန်မကန် ပြုလုပ်ထားသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် ငွေစာရင်းကို တင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ် ငွေစာရင်းကို မှန်ကန်သည်ဟု ၀န်ခံခြင်း သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(ဆ) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဟုတ်သော သို့မဟုတ် ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သော အခြားသူတစ်ဦးဦးက ယင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရစေရန်ဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရရေးအတွက် အားပေးလိုသောကြောင့်ဖြစ်စေ အစည်းအဝေး ကျင်းပ၍သော်လည်းကောင်း၊ စာရွက်စာတမ်းများ ဝေငှ၍သော်လည်းကောင်း၊ အခြား တစ်နည်းနည်းဖြင့်သော် လည်းကောင်း ငွေအကုန်အကျခံခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်ကျရန် ခွင့်ပြုခြင်း၊
(ဇ) ပုံနှိပ်သူ၊ ထုတ်ဝေသူတို့၏ အမည်နေရပ်မပါရှိသော ရွေးကောက်ပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကြော်ငြာ၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ပိုစတာ စသည်တို့ကို ဖြန့်ချိ ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် မိမိလိုလားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား အကျိုးရှိစေခြင်း၊
(ဈ) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်၏ တိုက်တွန်းချက်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ သဘောတူညီချက်ဖြင့် သော်လည်းကောင်း မဲဆန္ဒရှင်က ဆန္ဒမဲပေးချိန်တွင် မိမိ၏ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို မဲရုံမှအခြားသို့ ယူဆောင်သွားခြင်း၊
(ည) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်ကဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့တစ်ဦးဦး၏ သဘောတူညီချက်အရ အခြားသူတစ်ဦးကဖြစ်စေ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရရေးအတွက် အကူအညီကို ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဦးထံမှ ရယူခြင်း၊ ရယူရန်အားပေးကူညီခြင်း သို့မဟုတ် ရယူရန် အားထုတ်ခြင်း၊
(ဋ) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရရေးအတွက် ဘာသာရေး အထိမ်းအမှတ်များကို ရွေးကောက်ပွဲတွင် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လူမျိုးကိုဖြစ်စေ၊ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကိုဖြစ်စေ အကြောင်းပြု မဲပေးကြရန် သို့မဟုတ် မဲမပေးဘဲနေကြရန် အစီအစဉ်ပြု လျက်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊
(ဌ) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရရေးအတွက် ပါတီတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ မမှန်မကန် စွပ်စွဲခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ အများပြည်သူ ဆူပူမှုဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်း။
မြန်မာနှင့် လာအို မဟာမဲခေါင်မြစ် ဖြတ်ကျော်ချစ်ကြည်ရေးတံတား တည်ဆောက်မည်
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံသည် မဟာမဲခေါင်မြစ်ဖြတ် တံတားတစ်စင်း တည်ဆောက်ရန် နေပြည်တော်တွင် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ မဲခေါင်သုံးနိုင်ငံ ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးဖြစ်သော လာအိုခရီးစဉ်တွင် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ချင်း အတည်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းများအရ လာအိုနိုင်ငံမှ ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Sommad Pholsena နှင့် အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ မဲခေါင်မြစ်ဖြတ် ချစ်ကြည်ရေး တံတားဆောက်လုပ်ရန် အကြမ်းဖျင်း သဘောတူညီထားခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ “မတ်လ တတိယပတ်က လာပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ လာအိုဝန်ကြီးချုပ် လာပြီးကတည်းက ဒီကိစ္စ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပြောဆိုထားတာ တွေ့ရှိခဲ့တာ” ဟု ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ လာအိုဝန်ကြီးချုပ် Thongsing Thammovong သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့စဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံ၏ ရှေ့ရေးအလားအလာကို မျှော်ကိုးသောပုံစံနှင့် နှစ်နိုင်ငံ သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးကိစ္စများ အပါအဝင် ယင်းတံတားမှ ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စများကိုပါ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ မဲခေါင်မြစ်ချစ်ကြည်ရေးတံတား ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် လာအိုနိုင်ငံဘက်မှ သတင်းများအရ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ မဲခေါင်သုံးနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ သဘောတူညီမှုများ ပြုလုပ်သွားလိမ့်မည်ဟု တွက်ဆထားကာ မြန်မာသမ္မတ အနေဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကို မတ်လ ၂၀ ၊၂၁ နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကို မတ်လ ၂၁၊ ၂၂ ရက်လည်ပတ်ပြီးနောက် လာအိုနိုင်ငံကို မတ်လ ၂၃ ရက်တွင် အလည်အပတ်ရောက်ရှိ ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးပျံအတွက် ပြင်ဆင်နေ
From : MRTV-4 ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ မြောက် ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ဒုံးပျံလွှတ်တင်မယ့် အစီအစဉ် အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့နဲ့ ပူးတွဲကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တစ်ခု ဖွဲ့စည်းဖို့ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ လာမယ့်ဧပြီလ ၁၂ရက်နေ့နဲ့ ၁၆ရက်နေ့အကြားမှာ ဂြိုဟ်တုတင်ဆောင်ထားတဲ့ ဒုံးပျံတစ်စင်း လွှတ်တင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ ဒုံးပျံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတချို့ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကျွန်းတချို့ပေါ်ကို ပြုတ်ကျနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထား ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂျပန်ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနဟာ အဲ့ဒီ ဒုံးပျံအပိုင်းအစတွေ ဂျပန်ပိုင်နက်ကို ကျလာပါက ကြားဖြတ်ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ အဆင်သင့်ပြင် ထားမှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် သီတင်းပတ်အတွင်းမှာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး နာအိုကီတာနာကာက တရားဝင်ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးပျံအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖျက်ချဖို့ PAC-3 မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်ကြားဖြတ်ဒုံးလက်နက်တွေကို အီရှီဂါကီ၊ မီယာကိုနဲ့ အိုကီနာဝါ ကျွန်းတို့ အပါအ၀င် နေရာတော်တော်များများမှာ တပ်ဖြန့်ထားရှိမှာ ဖြစ်ပြီး SM-3 ဖျက် ဒုံးကျည်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Aegis ဖျက်သင်္ဘောတွေကိုလည်း အိုကီနာဝါ ကျွန်းအ နီး ရေပြင်မှာ တပ်ဖြန့်ထားရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်အစိုးရဟာ လာမယ့် သောကြာနေ့မှာ ၀န်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီကိုနိုဒါ နဲ့ အခြားဝန်ကြီးတွေ တက်ရောက်မယ့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးပျံအစိတ်အပိုင်းတွေကို ကြားဖြတ်ပစ်ချမှု လုပ်၊ မလုပ် ဆုံးဖြတ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Reference : NHK.com Myanmar Express
ဆင်းမ်းကဒ် တစ်ကဒ်ကို ၂ သိန်း ကျပ် ပေးရခြင်းက ဈေးကြီးတယ်လို့ ပြေနေကြသော်လည်း ၈၈ မျိုးဆက် များမှာ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးထုတ် ၆ သိန်းတန် ကဒ် များကို အားပေး
ဆင်းမ်ကဒ် တစ်ကဒ်ကို ၁ သိန်း ၈ သောင်းနဲ့ ချပေးခြင်းက ဈေးကြီးနေကြောင်းနဲ့ အခု ချပေးနေသော ဆင်းကဒ်များကို မဝယ်ပဲ ဆန္ဒပြသင့်ကြောင်း အတိုက်အခံ အင်အားစုများကြားမှာ အသံတချို့ ကြားနေရပေမယ့်လည်း ၈၈ မျိုးဆက်များအားလုံးနီးပါးကတော့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး မှ ချပေးတဲ့ ၆ သိန်းတန် ဖုန်းများကိုသာ ဝယ်ယူအားပေးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကို မကျေနပ်ဘူး၊ မတရားဘူးလို့ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး ကိုတော့ ဆန္ဒပြပြီး မနေကြပဲ ဆက်လက်ဆက်ဆံနေကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန် မှာ စတင် ချထားပေးတဲ့ ၁ သိန်း ၈ သောင်းတန် ဆင်းမ်ကဒ်များကို နယ်ဖက် ဒေသများက ၎င်း တို့ဒေသ တွေမှာ ချထားပေးမယ့် အချိန်ကို စောင့်နေကြတာ ကြာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသ ခံတွေက ပြောပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာတော့ စ တင်ရောင်းတဲ့ သုံးရက် အတွင်းမှာပဲ ကဒ် တစ်သောင်းကျော် ရောင်းခဲ့ရကြောင်း သိရပြီး အခြား ဒေသများတွင်လည်း သောက်သောက်လဲ ရောင်းခဲ့ရကြောင်း သိရပါတယ်။ အခုလို ချပေးခြင်းကြောင့် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းနဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးကို ပြည်သူ အများက အလွန်ကျေးဇူးတင်နေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။၆ သိန်းတန် ဖုန်းနဲ့ ဦးကိုကိုကြီး (အသမဲ)၆ သိန်းတန်ကို အားပေးကြ Myanmar Express
သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းတွင် ၁၆နာရီကြာ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့
From : MRTV-4 မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီဝ န်းကျင်ခန့် အချိန်က သန်လျင်မြို့နယ် သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းအတွင်း မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို မီးသတ်ဦးစီး ဌာနမှ ၂ နာရီ မိနစ် ၄၀ အချိန်ခန့်မှာ သတင်းရရှိပြီး သွားရောက် ငြှိမ်းသတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို သွားရောက်သတင်း ယူရာမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းမှ တာဝန်ရှိသူများက သတင်းဝင်ရောက် ရယူခွင့် မပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်း ရယူခွင့် မပေးတဲ့အပြင် အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူများက သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ မီးလောင်ကျွမ်း မှုကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ် စခန်းများမှ တာဝန်ရှိသူများက အဆက်မပြတ် ငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိပြီး ညနေ ၆ နာရီကျော်အထိ အဆိုပါမီးကို ငြှိမ်းသတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာ သစ်ပုံများကို ဆက်လက်ကူးစက် လောင်ကျွမ်းလျက်ရှိပြီး အဆိုပါ ဆိပ်ကမ်းမှ ကားဝယ်ယူ တင်သွင်းထားတဲ့ ကားပိုင်ရှင် အများစုဟာလည်း အဆိုပါ ဆိပ်ကမ်းကို ရောက်ရှိလာ ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို ကားပိုင်ရှင်များ ရောက်ရှိလာပေမယ့် ဆိပ်ကမ်း တာဝန် ရှိသူများက ကားထုတ်ယူခြင်း များကိုလည်း ခွင့်ပြုခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ မီးလောက်ကျွမ်း မှုကိုတော့ ပြည်တွင်း မီဒီယာများဖြစ်တဲ့ ပြည်မြန်မာဂျာနယ် ၊ ဧရာဝတီဂျာနယ် ၊ မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ် ၊ EPA ဥရောပ သတင်းဌာန နဲ့7Day ဂျာနယ် အစရှိတဲ့ မီဒီယာများ လာရောက် သတင်းရယူ ခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။ Myanmar Express
လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ကျန်းမာရေး ရန်ပုံငွေအား လေးဆ တိုးမြှင့်ချ ထားပေးရန် ရှိ
From : MRTV-4လာမယ့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် နိုင်ငံတော် ကနေ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ အတွက် ရန်ပုံငွေကို လေးဆ တိုးမြှင့်ပေးမှာ ဖြစ်လို့ ကမ္ဘာ့ တီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ပေးပို့တဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးရဲ့ သ၀ဏ်လွှာ အရ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရန်ပုံငွေမှာ တီဘီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တီဘီ လူနာများကို ရှာဖွေပြီး ပျောက်ကင်း အောင် ကုသပေး နိုင်ဖို့အတွက် ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင် သွားမှာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တီဘီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၄ နှစ် ၀န်းကျင်က ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီး ဌာနကနေ တီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ရန်ပုံငွေကို ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၄ သန်းသာ ခွဲဝေထား ရာက အခု ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ် မှာတော့ ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၀၀ ကျော်အထိ တိုးမြှင့်ချထား ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ တီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာမှာ အခု ဘဏ္ဍာနှစ် မှာလည်း ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တီဘီရောဂါ လူနာ တွေကို ရောဂါ ရှာဖွေကာ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသမှု တွေကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ရဲ့ စစ်တမ်းအရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့တီဘီ အများဆုံး ဖြစ်ပွားမှု ၂၂ နိုင်ငံထဲမှာ ပါဝင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အတွက်လည်း ကမ္ဘာ့တီဘီ ရောဂါ တိုက်ဖျက် ရေးနေ့ ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်တဲ့ တစ်သက်တာ တီဘီ ကင်းဝေးရေး၊ အားလုံး ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေး ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် အရ လုပ်ငန်းစဉ် ၁၀ ရပ် ချမှတ်ကာ ဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။ Myanmar Express
From : ရဲထွန်း ယနေ့နိုင်ငံတကာ အခြေအနေကို လေ့လာပါက တစ်ဦးတည်းသော မဟာအင်အားကြီး (Solo Super Power) နိုင်ငံမှ မဟာအင်အားလွန် နိုင်ငံ (Hyper Power) အဆင့်သို့ တက်လှမ်းနေသည့် အမေရိကန်သည် တစ်လောကလုံး အရေးသည် ၄င်း၏ အရေးဟု မှတ်ယူကာ မည်သည့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ ၊ ပြဌာန်းချက်၊ စာချုပ် စာတမ်းများကိုမှ အလေးမထားဘဲ မလိုလျှင် မလိုသလို အင်အားသုံး ပါဝင်စွက်ဖက်ကာ ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးရေး ၀ါဒ ( Hegemonism ) ကိုလက်ကိုထားပြီး ( Unilateralism ) ၀ါဒဖြင့် ကမ္ဘာ့စစ်ပုလိပ်ကြီးသဖွယ် လက်ဝါးကြီးအုပ်စိုးကာ ထင်တိုင်း ကြဲနေလျက် ရှိပါသည်။ ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများစုကမူ ဒွိ မဏ္ဍိုင်စနစ် ( Biplarity) ပျက်သုံးသွားပြီးနောက် ဗဟုမဏ္ဍိုင်စနစ် ( Multipolarity ) ဖြင့် ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်း လိုကြပါသည်။ အမေရိကန်တို့သည် အထက်ဖော်ပြပါ အန္တိမရည်မှန်းချက်ကို ဖော်ဆောင်ရန် ၄င်းတို့၏ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး မူဝါဒ (၃)ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအချက်မှာ ပုံဖော်ခြင်း (Shape) ဖြစ်သည်။ ပုံဖော်သည် ဆိုရာတွင် နိုင်ငံတကာနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု တည်ရှိနေရန် ပုံဖော်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း အမှန်စစ်စစ် အမေရိကန် အလိုကျ ပုံဖော်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ တုန့်ပြန်ခြင်း ( Respond) ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ်အသွယ်သွယ်ကို လက်မနှေးတု့န်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းမှာလည်း အမေရိကန် အလိုမကျမှုများကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်သည်ဟု တနည်းအားဖြင့် မှတ်ယူနိုင်သည်။ နောက်ဆုံး အချက်မှာ ပြင်ဆင်ခြင်း ( Prepare) ဖြစ်ပြီး မျှော်မှန်း၍ မရနိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စစ်အေးလွန်ကာလတွင် ၄င်းတို့ ကျင့်သုံးခဲ့သည့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ပြန့်ပွားခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် မူဝါဒသည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲပြီးနောက် အသုံးမတည့်တော့သည့်အခါ အမေရိကန်သည် လွတ်လပ်သည့် စီးပွားရေးစနစ်ကို အခြေခံသည့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ တိုးတက်ပြန့်ပွားရန် အားပေးကူညီရေး ဟူသည့် နိုင်ငံခြား ရေး မူဝါဒအသစ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကမ္ဘာ့ရှေ့ပြေးနေသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သည့် ဒီမိုကရေစီ ၀ါဒီများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူသားချင်း ညာတာထောက်ထားမှု အစရှိသည့် အတွေးအခေါ် အယူအဆများကို အသက်သွင်းပေးလျက် ကမ္ဘာကြီး၏ စစ်ပုလိပ် ( Global Police Man ) သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီး ( Global Governor ) အဖြစ် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသည်။ ““ ကမ္ဘာတွင် မည်သည့်နေရာ ဖြစ်စေ ၄င်းတို့၏ လူသားချင် ညှာတာထောက်ထားမှု ရှုဒေါင့်မှ ကျူးလွန်ပါက အမေရိကန်သည် အင်အားအသုံးပြုလျှက် ကာကွယ်တားဆီးရေး ဆောင်ရွက် ရမည်ဟူသော မူဝါဒ အတိုင်း ဆိုမာလီ၊ ဆူဒန်၊ ဟေတီ၊ ကိုဆိုဗို၊ အီရတ် အစရှိသည့် အရေးအခင်းတွင် စစ်အင်အားကို အသုံးပြုကာ ၀င်ရောက် စွက်ဖက်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းတွင် သြဇာပြန့်ကျက်ရေးနှင့် ၄င်းတို့၏ သြဇာမနာခံ သူများအား ပြစ်ဒဏ်ခတ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယင်းတို့၏ စံနှုန်းများကို ကမ္ဘာစံနှုန်းအဖြစ် နေရာတိုင်း တိုင်းတာကာ လိုရင် လိုသလို၊ မလိုရင် မလိုသလို ပြုကျင့်လာခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးမည့် ကုလ သမဂ္ဂကြီးပင်လျှင် အမေရိကန်၏ လက်ကိုင်တုတ်သဖွယ် ဖြစ်နေပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး လက်ဝါးကြီးအုပ် စိုးမိုး ချယ်လှယ်ဗိုလ်ကျမှုသည် ထိန်းမနိုင်၊ သိမ်းမရအောင် ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေး ၀ါဒကို ကျင့်သုံးလာသော အမေရိကန်သည် တစ်ဖက်မှလည်း ၄င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်လာသည့် ခြိမ်းခြောက်မှု မှန်သမျှကို ဟန့်တားရန်နှင့် ချေမှုန်း ရန်မှာ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ရဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်တို့သည် နိုင်ငံတကာ ပတ်ဝန်းကျင် လုံခြုံရေးကို လွှမ်းမိုးထားရန်နှင့် အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာနိုင်မည့် အရေးကိစ္စမှန်သမျှကို ထိရောက်စွာ လက်တုန့်ပြန်ပြီး မသေချာသော အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် အထက်ဖော်ပြပါ ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာကို ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော မဟာဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရာတွင် လက်ရှိ အမေရိကန် သမ္မတ ဂျော့ဒဗလျူဘုရ့် အယူဝါဒဖြစ်သော “ Either you are with us, or you are with the terrorists “ ““ ငါ့နောက်မပါ ငါ့ရန်သူ ”” သည် ကမ္ဘာတတိယ နိုင်ငံများ အတွက် စိုးရိမ် တုန်လှုပ်မှုများကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါသည်။ Myanmar Express
From : YPNပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အား သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရာတွင် ယုံကြည်မှု ပိုမိုခိုင်မာလာစေကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ)က ပြောသည်။ “အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားနေတဲ့အတွက် ပဒိုကို လွှတ်ပေးလိုက်တာလို့ မြင်တယ်။ ဒီလိုလွှတ်ပေးလိုက် တာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကို ပိုခိုင်မာလာတယ်။ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်လာနိုင်တယ်” ဟု ကေအန်ယူ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး နော်စီဖိုးရာစိန်က ပြောသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်နယ်အဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်အား ပြန်လွှတ်ပေးရန် ကေအန်ယူက တောင်းဆိုခဲ့ပြီး အစိုးရဘက်ကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်စေချင်သဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးမည်ဟု ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း ကိုယ်တိုင် ကတိပေးခဲ့ကြောင်း နော်စီဖိုးရာစိန်ကပြောသည်။ “သူတို့ကလည်း ကတိအတိုင်း လုပ်ဆောင်တာကို တွေ့ရတော့ ပြောင်းလဲမှုအတွက် သူတို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ တွေ့လာတာပေါ့” ဟု သူက ပြောသည်။ ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့တွင် အစိုးရနှင့် ကေအန်ယူတို့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ကိစ္စများကို အကြိုညှိနှိုင်းရန် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့၌ရောက်ရှိလာသည့် ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင် သော အဖွဲ့ဝင် (၇) ဦးပါ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နှင့်အတူ မန်းငြိမ်းမောင်လည်း ပါလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခိုင်မာသော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရရှိရန်၊ နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးရုံးများ ထားရှိရန်၊ စစ်အင်အား မတိုးချဲ့ရေး၊ ကရင်လူထုနှင့် နီးကပ်တည်ရှိနေသော စစ်တပ်များအားရုပ်သိမ်းပေးရေးတို့ကိုလည်း ဧပြီ (၄) ရက်နေ့ တွေ့ဆုံသည့်အခါ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု နော်စီဖိုးရာစိန်က ပြောသည်။ ဧပြီလ (၄) ရက် ခရီးစဉ်အတွင်း ကေအန်ယူ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နေမှုကိစ္စများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်စေချင်သဖြင့် အစိုးရက ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည့် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် သည် အနားယူရန် လိုအပ်နေသဖြင့် လာမည့်ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပါဝင်နိုင်ဦးမည် မဟုတ်ကြောင်း ကေအန်ယူက ပြောသည်။ ကေအန်ယူ ဗဟိုကော်မတီဝင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်၌် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုနှင့် မင်္ဂလာဒုံတရားရုံးကထောင်ဒဏ်ခြောက်လ ချမှတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် ကေအန်ယူအဖွဲ့မှ ဖြစ်သဖြင့် မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှု၊ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု စွဲချက်များဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်နှင့် တစ်သက်တစ်ကျွန်းကို တပေါင်းတည်း ကျခံရန်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး တစ်ပတ်အကြာ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ။ Myanmar Express
(၆၇) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုကဗျာ
From : ဖိုးသော်“တပ်မတော်ဆိုတာ”*ပြည်တွင်းပြည်ပရန်စွယ်ကများဖျက်သမားစုံရမ်းကားသူပေါခောတ်မျောချိန်ခါပြည်မြန်မာကြီးပျက်စီးဆဲဆဲထိုရန်ထဲမှအမြဲလွတ်အောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့တာ တပ်မတော်…*ထိုမျှမကြာပေါ်လာပြန်ကြပြည်တွင်းရန်များကာကွယ်ကြပြီးစစ်မီးငြိမ်းဖို့အသက်တို့ပေးရှေ့ရေးမကြည့်တက်သိတာဝန်လူချွန်စိတ်ထားလွန်စွာများတာ တပ်မတော်…*သစ္စာလေးချက်ဦးထိပ်ရွက်လို့အသက်ကိုပေးသမိုင်းရေးခဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ရန်မှန်မှန်သမျှတိုက်ထုတ်ရမည်ရည်ရွယ်သည်ကတပ်သားစပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထိအသိရှိ၏ …တပ်မတော်ဆိုတာ တို့နိုင်ငံ့အတွက် ။တပ်မတော်ဆိုတာ တို့လူမျိုးအတွက် ။တပ်မတော်ဆိုတာ တို့အားလုံးအတွက် ။Myanmar Express
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ (၆၇) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော (၆၇) နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား၌တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသရေစည်သူမင်းအောင်လှိုင် ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်းရဲဘော်တို့ဒီနေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း ကြောင်းနဲ့ အတူ ယှဉ်တွဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ ဒို့တပ်မတော်ရဲ့ (၆၇) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ ဖြစ်တယ်။ ခေတ်သစ် စနစ်သစ်နဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်ဆီ ချီတက်နေတဲ့ ကာလမှာ ပထမဦးစွာ ကျင်းပတဲ့ တပ်မတော်နဲ့ အခမ်းအနားလည်း ဖြစ်လို့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို အလေးအနက် မှာကြားသွားမှာ ဖြစ်တယ်။ရဲဘော်တို့ဒို့နိုင်ငံတော်ကို နယ်ချဲ့ ကိုလိုနီလက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ ဒို့နိုင်ငံသားတွေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် တပ်မတော် တစ်ရပ်ဖွဲ့စည်း ထူထောင်ပြီး လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ပွဲဝင်မှသာ လွတ်လပ်ရေး ရရှိနိုင်မယ်လို့ နားလည် ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာ့ မျိုးချစ်လူငယ် ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဟာ ဂျပန်တွေဆီက စစ်ပညာတွေ သင်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဘီအိုင်အေ လို့ ခေါ်တဲ့ ဗမာ့ လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ဂျပန်တပ်များနဲ့ အတူ နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ ကနေ တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်၊ ဘီအိုင်အေ ဖွဲ့စည်းစမှာ အင်အား ၂၀၀ ကျော်သာ ရှိရာက အင်အား ၅၀,၀၀၀ ကျော်အထိ တိုးပွားလာတာကို စိုးရိမ် ပူပန်လာတဲ့ ဂျပန်တို့ဟာ ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှာ ဘီအိုင်အေ အစား အင်အား ၃,၀၀၀ ခန့်သာ ရှိတဲ့ ဗမာ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် (ဘီဒီအေ) ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေး ခဲ့တယ်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ ဘီဒီအေ ကို ဗမာ့တပ်မတော် ( ဘီအင်န်အေ) အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဗမာ့ တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူ လူထူနဲ့လက်တွဲပြီး ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကို တော်လှန် တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ဗမာ့တပ်မတော်ကို မျိုးချစ်ဗမာ့ တပ်မတော် (ပီဘီအက်ဖ်) လို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ် ခဲ့ကြတယ်။ ဒီ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ဒို့ တပ်မတော် ဟာ နိုင်ငံတော် အတွက် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ အတူ ပြည်သူကြားက ပေါက်ဖွား လာတဲ့ မျိုးချစ် တပ်မတော် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ထင်ရှား စွာတွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ရဲဘော်တို့သမိုင်းကြောင်းကောင်းတဲ့ ဒို့တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူ ကြားက ပေါက်ဖွား လာတဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်တာနဲ့ အညီ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသူ ၊နိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေကို အစဉ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ဖို့ အမြဲ ဦးထိပ် ပန်ဆင် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိ တယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး နောက် ပိုင်း ပေါ်ပေါက် လာခဲ့တဲ့ တရုတ်ဖြူ ကျူးကျော်စစ် အပါအ၀င် ပြည်တွင်းပြည်ပ အန္တရာယ် မှန်သမျှကို ဒို့ တပ်မတော်သားတွေ ရဲ့ အသက်၊ ခန္ဓာတွေ စွန့်လွှတ်ပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောင့် ခဲ့ကြတယ်။ ဒို့နိုင်ငံတော်ကြီးကို ဒုက္ခရောက်စေမယ့်၊ ပြိုကွဲ ပျက်စီးစေမယ့် ၊ တိုင်းရင်းသားများ ချစ်ကြည် စည်းလုံးမှု ပြိုကွဲပျက်စီးစေမယ့်၊ ဒို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိပါးမယ့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အန္တရာယ် မှန်သမျှနဲ့ အဖျက် လုပ်ရပ် မှန်သမျှကို သမိုင်း အစဉ်လာ ရှိရှိ ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ခဲ့သလို ရှေ့ဆက်ပြီး လည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သွားမှာ ဖြစ်တယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းဟာ နိုင်ငံတော် သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ခွဲခြားလို့ မရကြောင်း ပြောကြားလိုတယ်။ရဲဘော်တို့ဒို့တပ်မတော် စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်က စလို့ ယနေ့ အချိန်အထိ ခေတ်အဆက်ဆက်ဖြတ် သန်းကျော်ဖြတ် လာတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ မျိုးချစ် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ကြီးတွေ ဟာ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး စွမ်းအား မြင့်မားနေစေဖို့ ဒို့တပ်မတော်ကို အရေအတွက်သာမက အရည်အချင်းပါ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် တည်ဆောက် ခဲ့ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေ မှာလည်း လူ၊ လက်နက် အင်အားတိုးတက်ရေး ၊ စစ်ပညာရပ်များ မြင့်မာရေးတို့ကို အခြေအနေပေး သရွေ့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ခဲ့တယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးစ ပြည်တွင်းပြည်ပ အန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရ ချိန်မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း ဦးဆောင်တဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် များဟာ အန္တရာယ်တွေကို ရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ တပ်မတော် အင်အားကို တိုးချဲ့ တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ တပ်မတော်ကို ခေတ် မှီတဲ့ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများနဲ့ ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဦးဆောင်တဲ့ တပ်မတော် အကြီးအကဲ များက (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) တပ်မတော် တစ်ရပ်လုံးကို ခေတ်နဲ့ အညီ ရင်ဘောင် တန်းနိုင်အောင် လက်နက်၊ ပစ္စည်း ၊ ကိရိယာများ ဖြည့်ဆည်း အောင်ရွှက်ပေးခြင်း ၊ တပ်မတော် အဆင့် အတန်း မြင့်မားရေး အတွက် တပ်မတော် ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ၊ စစ်ကျောင်း ကြီးများနဲံ့ လေ့ကျင့်ရေး ကျောင်းများကို အဆင့်မြင့် တင် ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း စတာတွေ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့တယ်။ တပ်မတော် ဖခင်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကြီးသန်းရွှေ တို့က လက်ဆင့် ကမ်း အမွေ ဆက်ခံပြီး စည်းကမ်း ကောင်းတဲ့ ၊ စနစ်တကျရှိတဲ့ ခေတ်မှီ တပ်မတော် တစ်ရပ် အဖြစ် ခေတ်ကာလနဲ့ အညီ တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာကို ကျေးဇူးတင်ထိုက်စွာ မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒို့ တတွေ အနေ နဲ့လည်း တပ်မတော်ကြီးကို နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက် နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အင်အားတောင့် တင်းပြီး စွမ်းရည် ထက်မြက်တဲ့ ခေတ်မှီ မျိုးချစ် တပ်မတော် ဖြစ်အောင် ဆက်လက် တည်ဆောက် သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုတယ် ။ရဲဘော်တို့ ၁၉၈၈ ခနှစ်မှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အခြေ အနေ အရပ် ရပ် ယိုယွင်း ပျက်စီးလာ တာကြောင့် ဒို့ တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို ရယူခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေး ချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကို ပြည်သူ လူထုနဲ့ အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ ဒီလို ဆောင်ရွက် ရာမှာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး ဦးတည် ချက် တွေစနစ် တကျ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ တာကြောင့် နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွါးရေး ၊လူမှုရေး ကဏ္ဍ မှာလည်း အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး အတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ များနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတော်ကို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် အဖြစ် ရောက်ရှိအောင် ဖော်ဆောင်ပေး မယ်လို့ ကတိပေးထားခဲ့ တာနဲ့ အညီ အမျိုးသား ညီလာခံကို ကျင်းပပြီး ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကို ရေးဆွဲ ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတော်ရှေ့ ဆက်သွားမယ့် မူဝါဒ လမ်းစဉ် ၇ ရပ် ချမှတ်ပြီး အဆင့် လိုက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ခဲ့တယ်။ အမျိုးသား ညီလာခံ က တစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ပြည်လုံး ကျွတ် ဆန္ဒ ခံယူပွဲကျင်းပပြီး အတည်ပြုပြဋ္ဌန်း နိုင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့် နှစ်မှာ ပါတီ စုံဒီမိုကရေစီ ရွေး ကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပေး ခဲ့ပြီး ရွေးကောက် ပွဲ မှာ ပြည်သူတွေ ရွေးချယ် လိုက် တဲ့ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၃၁) ရက်နေ့မှာ လွတ်တော်ခေါ်ယူ ကာ လွတ်တော်က ရွေးကောက် တင်မြှောက်တဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတနဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ ထံ နိုင်ငံတော် အာဏာ အရပ်ရပ်ကို စနစ်တကျ ပြန်လည် လွဲပြောင်း ပေးအပ် ခဲ့တယ်။ ဒို့ နိုင်ငံတော် ကို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် ဆီသို့ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်း နိုင်အောင် တပ်မတော် ဟာ ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း မှန်ကန် တည်ကြည်စွာ ဖြင့် လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ် ရောက်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့တယ်။ရဲဘော်တို့ခေတ်မီ ဖွံဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက် လျှောက်လှမ်း တဲ့လမ်းကြောင်းမှာ တို့တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သတ်လို့ ပြောကြား လိုတယ်။ ဒို့နိုင်ငံရဲ့ ပထ၀ီ အနေအထား သမိုင်းကြောင်းများ အရ နိုင်ငံတော် နဲ့နိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ အမျိုးသား အကျိုး စီးပွားကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် အကောင် အထည် ဖော်ဖို့ အတွက် ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှု့ မပြို ကွဲရေး၊ အချုပ် အခြာ အာဏာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေး ဆိုတဲ့ ဒို့တာဝန် အရေး(၃)ပါး ကို အမျိုးသားရေး မူဝါဒ အဖြစ် ချမှတ် ထားတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကာကွယ်ရေး မူဝါဒ ချမှတ်ထား ရာမှာ ဒို့တာဝန် အရေး(၃)ပါး ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရန်ဆိုတဲ့ အချက် တစ်ချက် ပါရှိသလို နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ လည်း ဒို့တာဝန် အရေး(၃)ပါးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တပ်မတော်တွင် အဓိက တာဝန်ရှိ တယ်လို့အတိအလင်း ပြဠာန်းထားတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်ဟာ ဒို့တာဝန် အရေး(၃)ပါးကို စွဲမြဲစွာ ခံယူစောင့်ထိန်း သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုတယ်။ရဲဘော်တို့နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြဠာန်းချက်များနဲ့အညီ လွှတ်တော် အသီးသီးမှာ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ် များ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာ ဟာ ဖြတ်သန်း လာခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းများ အရ တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကျိုးကို ဖော်ဆောင် ဖို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းသာ ဖြစ်တယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အမျိုးသား နိုင်ငံရေး တာဝန် တစ်ရပ်ကို ထမ်းဆောင်နေခြင်း ပဲဖြစ်တယ်။ တပ်မတော် ဆိုတာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ နဲ့ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒို့တပ်မတော်မှာ တိုင်းရင်းသား အားလုံး ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထား တာကြောင့် ဒို့တပ်မတော်ဟာ အမျိုးသား တပ်မတော်၊ တစ်နည်း အားဖြင့် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ပြည်ထောင်စုဖွား ဒို့ တပ်မတော် သားတွေဟာ နိုင်ငံတော် စစ်မှု့ထမ်း ဥပဒေအရ ၀င်ရောက်ခဲ့ ကြသူများ မဟုတ်ဘဲ မိမိသဘော ဆန္ဒ အလျောက် ၀င်ရောက် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။ ခန္ဒာကိုယ် ပင်ပန်းဆင်းရဲမှာ စိတ် ပင်ပန်းဆင်းရဲမှာ မိမိ အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ စွန့်လွှတ် ပေးဆပ်ရမှာကို သိလျက်နဲ့ အခြေခံ အားဖြင့် အလွန် မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ နဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးကို၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ ၀င်ရောက် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင့် ဒို့တပ်မတော် ဟာ ဒို့ တာဝန် အရေး(၃)ပါး ကို ဦးထိပ်ထား ပြီး နိုင်ငံတော် ရဲ့ အကျိုး စီးပွား ပြည်သူလူထု ရဲ့ အကျိုး စီးပွားများ နဲ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေ တာ ဖြစ် သလို နိုင်ငံတော် ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ ဒေသ အလိုက် ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ရေးတွေကို ပြည်သူ လူထုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင် ရွတ်လျက်၇ှိတယ်။ ဒီလို ဆောင်ရွတ် ရာမှာ ပါတီ နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းစွာ နဲ့ လူမျိုးစွဲ၊ ဒေသစွဲတွေ မပါ၇ှိဘဲ တစ်နိူင်ငံလုံး၊ တစ်မျိုး သားလုံး အကျိုး စီးပွားကို ဖော်ဆောင် နိုင်မယ့် အမျိုးသား နိုင်ငံရေး သက်သက် ကိုသာ ဆောင်ရွတ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာ စစ်မှန်သော မျိုးချစ် စိတ်ဖြစ် တဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ် နဲ့ တပ်မတော်က ပါဝင် ထမ်းဆောင်နေခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းပြော ကြားလိုတယ်။ရဲဘော်တို့ဒို့တပ်မတော် သားတွေက တပ်မတော် နည်းဥပဒေ၊ အက်ဥပဒေတွေကို လိုက်နာ၇ုံသာမက နိုင်ငံတော် က ထုတ်ပြန် ထားတဲ့ နယ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုလည်း ပြည်သူများ နည်းတူ လိုက်နာစောင့်ထိန်း ကြရမယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အသက် သဖွယ်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို နိုင်ငံသား အားလုံးနဲ့ အတူ ဒို့တပ်မတော်က လေးစား လိုက်နာ ရမှာဖြစ်သလို ကာကွယ် စောင့်ရှောက် သွားရမှာလည်း ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀၊ ပုဒ်မခွဲ(စ) မှာ "တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် အဓိက တာဝန်ရှိတယ်။" လို့ အတိအကျ ဖော်ပြ တာဝန် ပေးအပ်ထားပြီး ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒို့ တပ်မတော် အနေနဲ့ ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုး တက်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် သစ် တည်ဆောက်ရာမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အဓိက တာဝန်တစ်ရပ် အနေနဲ့ ကာကွယ် စောင့်ရှောက် သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုတယ်။ရဲဘော်တို.ဒို့နိုင်ငံဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သော်လည်း နယ်ချဲ့တို့ရဲ့ သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်မှု တွေကြောင့် တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း အမြင်လွဲမှားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်လည်း မငြိမ်မသက် ဖြစ်ခဲ့ ရတယ်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ထိုးနှက်ချက်တွေကြောင့် အာဏာရ ပါတီ၊ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်များ အတွင်း အုပ်စုကွဲမှုတွေ ညီညွတ်မှု မရှိခဲ့တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆောင် ရွက်ရမဲ့ အချိန်မှာ ပြသနာတွေ ဖြေရှင်းနေ ရတာ နဲ့ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းပြီး တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှုတွေ နောက် ကျ ခဲ့ရတာကို သင်ခန်းစာ ယူရမှာ ဖြစ်တယ်။ ယခု အချိန်မှာ မှန်ကန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်း နေတာကြောင့် ဒို့တတွေ အားလုံး နိုင်ငံတော်ကို ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ တင့်တယ်စွာ ရှိနေစေရေး အတွက် စိတ်ကောင်း စေတနာ ကောင်းနဲ. ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက် ကြဖို.လိုတယ်။ နိုင်ငံတော် တစ်ရပ် ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်။ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ခေတ် အဆက်ဆက် ကြိုးပမ်းခဲ့ ရာမှာ ထာဝရငြိမ်း ချမ်းရေး ရတဲ့အထိ အောင်မြင်မှု မရသေးတဲ့ အတွက် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတော်က အလေးထား ဆောင်ရွက် နေတယ်။ ပထမအဆင့် အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း နဲ့ ပြည်နယ်၊ တိုင်း ဒေသကြီး အဖွဲ့မှ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး မယ့်အဖွဲ့များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့်မှာ ပြည်ထောင် စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး မယ့် အဖွဲ့များနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခြင်း၊ နောက်ဆုံး အဆင့် မှာ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် တွင် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အပြီးသတ် ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်တယ်။ ပြည်ထောင်စု အဆင့် သဘော တူညီချက်များ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့ ဒေသတွေမှာ တပ်မတော်ဟာ သဘော တူညီချက်များ အတိုင်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး ကို ရှေးရှု ဆောင်ရွက်လျက် ရှိတယ်။ အခြေအနေပေးတဲ့ နေရာတွေ မှာလည်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို တစ်ဆက်တည်း အားသွန် ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိတယ်။ အသက် ခန္ဓာတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင် ကြရတဲ့ ဒို့တပ်မတော် ဟာ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို ပိုပြီး လိုလားတယ်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်နှင့် နိုင်ငံတော်နဲ့ အတူ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီကတစ်ဆင့် နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောကြားလိုတယ်။ရဲဘော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အဖြစ် လျှောက်လှမ်းနေတာ တစ်နှစ်သက်တမ်း သာရှိသေးတဲ့ ဒို့နိုင်ငံဟာ မြင့်မား ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အတွက် နိုင်ငံရေး စွမ်းအား၊ စီးပွားရေး စွမ်းအားနဲ့ ကာကွယ်ရေး စွမ်းအားတွေ မြင့်မား ခိုင်မာစွာ အချိတ် အဆက်မိမိ ဟန်ချက်ညီစွာ တိုးတက်နေဖို့ လိုအပ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ဒို့နိုင်ငံတော်မှာ နိုင်ငံရေး စွမ်းအားမြင့်မားရေး အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဟာ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး နဲ့ နိုင်ငံ အေးချမ်း တည်ငြိမ်မှု ရှိရေးပဲ ဖြစ်တယ်။ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ရှိလာ တာနဲ့ အမျှ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အစိုးရ ယန္တရား လည်ပတ်မှုတွေ ပီပြင်လာမယ်၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးမှုနဲ့ အညီ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဘောင်ထဲ ကနေ နိုင်ငံရေး စွမ်းအား စုတွေ အားလုံး မှန်မှန် ကန်ကန် ပါဝင် ဆောင်ရွက် လာနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာ မှာ ၀င်ဆန့်မှုတွေ ပိုမို အားကောင်း လာပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပ နိုင်ငံရေး အနေ အထားတွေ မြင့်မား လာမှာပဲ ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်ခိုင်မာ မှုဟာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု အတွက် တွန်းအား တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး နဲ့အတူ နိုင်ငံတော် နဲ့ ပြည်သူများ ရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက် မြင့်မားရေး ကို ဆောင် ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်မှာ ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ သဘာဝ သယံဇာတ များနဲ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်တွေ ကို အသုံးချပြီး လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး၊ စက်မှုနဲ့ နည်းပညာ၊ ၀န်ဆောင်မှုနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍတွေကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရင် နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးဟာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ၂၁ ရာစုမှာ ၁၉ ရာစုနှစ် တွေ ကလို နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံကို အခြားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံက စစ်ရေး သက်သက်နဲ့ ကျူးကျော် သိမ်းပိုက်ပြီး ကျွန်ပြုတဲ့ ခေတ် မဟုတ်တော့ ဘဲ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှူရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုစတဲ့ နယ်ပယ် အသီးသီးကနေ နည်းမျိုးစုံနဲ့ လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင်တဲ့ နည်းတွေ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက် လာကြတယ်။ ဒီလို ပြောင်းလဲ လာတာတွေ ကြောင့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အချုပ်ခြာ အာဏာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးကို ကောင်းစွာ ကာကွယ် စောင့်ရှာက်နိုင်ဖို့ ကာကွယ်ရေး စွမ်းအား မြင့်မား နေစေရေး အတွက် ဒို့ တပ်မတော်ဟာ အင်အား တောင့်တင်းပြီး စွမ်းရည် ထက်မြက်တဲ့ ခေတ်မီ မျိုးချစ် တပ်မတော် တစ်ရပ်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ အလားတူ စစ်ရေး မဟုတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင် လိုမှုများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက် နိုင်ရေး အတွက် အားလုံး အမြင် ကျယ်ပြန့်စွာ သိရှိ ဆင်ခြင် ဆောင်ရွက် သွားဖို့ လိုအပ်တယ်။နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး စွမ်းအား မြင့်မား နေစေ ဖို့ ဒို့ တပ်မတော် အင်အား တောင့်တင်း ခိုင်မာရေး အတွက် နိုင်ငံတော်၊ တပ်မတော် နဲ့ နိုင်ငံသား အားလုံးက တက်ညီ လက်ညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး စွမ်းအား တောင့်တင်း ခိုင်မာစေဖို့ ခတ်မီ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေ ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ရေး အတွက် တပ်မတော်ကလည်း သုသေသနပြု တီထွင်ထုတ်လုပ် ရမှာဖြစ်တယ်၊ မိမိတို့ ထပ်မံလိုအပ်တဲ့ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေကို နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍငွေ ရရှိမှုပေါ် မူတည်ပြီး ၀ယ်ယူ ဖြည့်တင်း ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ အပါ အ၀င် နိုင်ငံ အသီးသီးက ကာကွယ်ရေး စွမ်းပကားများ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နေ တာကို မပြတ်လေ့လာပြီး မိမိတို့ ကလည်း နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အတွက် ပြင်ဆင် ဖြည့်တင်း ဆောင်ရွက် သွားဖို့လိုတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ စွမ်းပကား၊ ပြည်သူ လူထုရဲ့ စွမ်းပကား များ ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး စွမ်းပကား မြင့်မား ခိုင်မာအောင် လုပ်ကြရမယ်။စစ်သားကောင်းတို့ရဲ့ အရည်အချင်းဟာ စစ်စည်းကမ်း ကောင်းခြင်းနဲ့ အမိန့် နာခံခြင်း တို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်း နေတဲ့ နေရာမှာ စည်းကမ်းနဲ့ စနစ် တကျ ရှိတဲ့ လမ်းကြောင်း ပေါ်မှာသာ သွား ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒို့ တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့ စစ်စည်းကမ်း၊ စစ်မြေပြင် စည်းကမ်း အပြင် နိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေ၊ စည်းကမ်း များကို နိုင်ငံသား များနည်းတူ လေးစား လိုက်နာ ကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ မည်သူမဆို မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာမှာ နေရင် သက်ဆိုင်တဲ့ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ လိုက်နာ လုပ်ကိုင်နေထိုင်ရ သလို၊ တပ်မတော် အတွင်းမှာလည်း တပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စည်းကမ်း များနဲ့ လိုက်နာ နေထိုင် လုပ်ကိုင် ကြရမှာ ဖြစ်တယ်၊ စစ်စည်းကမ်း ဟာ တပ်မတော်ရဲ့ ကျောရိုးမဏ္ဍိုင် ဖြစ်တာနဲ့ အညီ စစ်စည်းကမ်း ကောင်းမွန်တာနဲ့ အမျှ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အမိန့်နာခံမှုပါ အလိုလို ကောင်းလာ တာ တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်ရဲ့ ကျောရိုးမဏ္ဍိုင် ခိုင်မာစေဖို့အတွက် စစ်စည်းကမ်းကို အမြင့်မားဆုံး လိုက်နာ စောင့်ထိန်းတဲ့ တပ်မတော်၊ အမိန့်နာခံ မှုကောင်းတဲ့ တပ်မတော်အဖြစ် ခေတ် အဆက်ဆက် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကစလို့ ဒီကနေ့ အထိ နိူင်ငံတော်ရဲ့ တာဝန်တွေကို စွမ်းစွမ်းတမံ ထမ်းဆောင်နိူင်ခဲ့ ခြင်း ဟာ ဒီလို အခြေခံကောင်းတွေ နဲ့ ပြည့်စုံခြင်း၊ တပ်မတော် အစဉ်အလာ (၁၂)ရပ် ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ အမျိုးသားနင်ငံရေးအသိ နိူးကြားမှု ရှိခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ရှေ့ ဆက်လက်ပြီး နိူင်ငံတော်ရဲ့ တာဝန်၊ အမျိုးသားရေး တာဝန်တွေကို ထူးချွန် ပြောင်မြောက်စွာ ထမ်းဆောင်နိူင်ဖို့ အခြေခံ ကောင်းတွေ၊ အစဉ်လာ ကောင်းတွေကို ဆက်လက် သယ်ပိုး စောင့်ထိန်းသွားကြဖို့မှာကြားလိုတယ်။ရဲဘော်တို့နိူင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် နေကြတဲ့ ဒို့ တပ်မတော် သားတွေဟာ စစ်ရေးအမြင် သက်သက်နဲ့ ရည်မှန်းချက် တာဝန်တွေ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး အမြင်(၄)ရပ်ပြည့်စုံနေအောင် ဖြည့်ဆည်းနေ ကြဖို့ လိုအပ်တယ်၊ နိူင်ငံ တကာမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာပြီး ဒို့နိုင်ငံ ရဲ့ ပကတိ အခြေအနေနဲ့ အညီ ညီညွတ်စွာ ဦးတည် ချီတက် နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း အတိုင်း လျှောက်လှမ်းနိူင်ရေး၊ နိူင်ငံတော် အချုပ် အခြာ အာဏာ ထိပါး မခံရရေး၊ ပြည်သူ၊ တပ်မတော်နဲ့ နိူင်ငံတော် အစိုးရ ပူးပေါင်းပြီး တရားဥပဒေနဲ့ အညီ နိူင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဆောင်ရွက်နိူင်မယ့် အခြေ အနေတွေကို မပြတ်လေ့လာနေဖို့ လိုအပ်တယ်။ နိူင်ငံတကာရဲ့ တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စီးပွားရေး အခြေ အနေများနဲ့ မိမိတို့နိူင်ငံမှာ ပြည်သူ့ အကျိုးစီးပွားကို အမှန်တကယ် ဖော်ဆောင်နိူင်မယ့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ သိရှိနေအောင် လေ့လာနေကြဖို့ လိုအပ်တယ်။ နိူင်ငံတော် ရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်စေဖို့ အတွက် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ၊ စက်မှုကဏ္ဍ နဲ့ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍတွေ အချိုးကျကျ ပါဝင်နေဖို့ လိုအပ်တယ်။ ငွေကြေး ခိုင်မာမှုရှိဖို့ လည်း လိုအပ်တယ်။ နိူင်ငံတော်ရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံစေဖို့ အတွက် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ ကို လက်လွှတ်လို့ မရသလို ခေတ်မီတဲ့နုိူင်ငံ တစ်နိူင်ငံဖြစ်ဖို့ စက်မှုနိူင်ငံအဖြစ် မဖြစ်မနေ သွားရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံပြီး ရရှိလာတဲ့ အရင်း အနှီးတွေနဲ့ စက်မှု ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ၀ိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက် သွားကြရမယ်။ စက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက် လာတာနဲ့ အမျှ ၀န်ဆောင်မှု ကဏ္ဍကိုလည်း တိုးတက်အောင် ဆောက်ရွက် သွားရမယ်။ လူနေမှုအဆင့် အတန်းမြင့်မားရေးနဲ့ အရင်း အနှီးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်နှီး မြှုပ်နှံမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကို တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် သွားရမယ်။ ဒို့နိုင်ငံကို ခေတ်မီ စက်မှုနိူင်ငံ တစ်ခုဖြစ်အောင် တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ နိူင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေး ဦးတည်ချက်တွေ အတိုင်း တပ်မတော်က သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍမှ တစ်တပ် တစ်အား ပါဝင် ဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုတယ်။ဒီကနေ့ နိူင်ငံတော်က ချီတက်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းမှာ အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို တပ်မတော်က မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည် ဆောင်ရွက်ပေး သွားမှာဖြစ် လို့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ် စနစ်နဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်နေ တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံတွေကို မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာနေကြဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒို့နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံအဆင့်ကို ရောက်ရှိဖို့ တက်လှမ်းနေတဲ့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံကြီး ၂ နိုင်ငံနဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ် နေရုံသာမက တောင် အာရှနိုင်ငံများနဲ့ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများ ကို ပေါင်းကူးဆက် သွယ်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိနေတာ ရဲဘော်တို့ အသိပဲဖြစ်တယ်။ ဒို့တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့အညီ အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက တပ်မတော်တွေနဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံလျက်ရှိသလို မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါတဲ့နေရာမှာ တည်ရှိနေတဲ့ ဒို့နိုင်ငံရဲ့ ပထ၀ီ အနေအထား ကို မှန်ကန်စွာ ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံတော် ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် မြေပြင်၊ ရေပြင်၊ ဝေဟင် ပိုင်နက်တို့ကို ကာကွယ်နိုင် ဖို့အတွက် စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး အမြင်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေအောင် ကြိုးပမ်းနေကြဖို့ အလေးအနက် မှာကြားလိုတယ်။ရဲဘော်တို့မိမိတို့ တပ်မတော်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ခေတ်မီ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေကို မှန်ကန် ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်အောင်၊ ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်စွာ ကိုင်တွယ် တတ်အောင် လေ့ကျင့်နေ ကြရမှာဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ရေမြေသဘာဝ အနေအထား၊ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ အညီ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်မယ့် မှန်ကန်တဲ့ စစ်နည်းဗျူဟာ များကို ကျင့်သုံးနိုင်အောင်လည်း လေ့ကျင့်နေကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတွေ၊ စစ်နည်း ဗျူဟာတွေကို ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်မှု ရှိအောင် လေ့ကျင့်ရမှာ ဖြစ်သလို လက်တွေ့ စစ်မြေပြင်မှာ ရန်သူကို ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ၀င်နိုင်အောင် ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ စိတ်ဓာတ် ကြံ့ခိုင်မှုတွေ ပြည့်စုံအောင် လည်း လေ့ကျင့်နေ ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဒီလို ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ စစ်နည်း ဗျူဟာကောင်းမွန်မှု တွေနဲ့ ပြည့်စုံမှသာ စစ်မြေပြင်မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်။ဒို့တပ်မတော်ကို စတင် တည်ထောင်ကတည်းက စစ်ဦးစီး၊ စစ်ရေး၊ စစ်ထောက် လုပ်ငန်းကြီး(၃) ရပ်နဲ့ စနစ်တကျ တည်ဆောက် ထားခဲ့တယ်။ ဒီလုပ်ငန်း ကြီးတွေမှာ သူ့စနစ်နဲ့ သူရှိပြီး၊ ကောင်းမွန် ပြည့်စုံပြီး ဖြစ်တာကြောင့် စစ်ဦးစီး၊ စစ်ရေး၊ စစ်ထောက် လုပ်ငန်း ပင်နီယံကြီး(၃)ခု ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နေအောင် ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် တပ်မတော်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကို ကောင်းမွန်းအောင် တည်ဆောက် သွားကြဖို့ မှာကြား လိုတယ်။ရဲဘော်တို့သက်သာ ချောင်ချိရေးမှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ တာဝန်ရှိ သူများက ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ စစ်သည်များ ကိုယ်တိုင် သက်သာ ချောင်ချိမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက် ခြင်းဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းရှိရာမှာ နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ တာဝန် ရှိသူများ က လိုအပ်သည် များ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိသလို စစ်သည် မိသားစုများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အခြေအနေ အချိန်အခါပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ပိုင် တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးမွေး မြူရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၀င်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ မျှတအောင် စိစစ် သုံးစွဲခြင်းဖြင့် မိသားစု သက်သာချောင်ချိ မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက် ရမှာဖြစ်တယ်။ တပ်မိသားစုများရဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထွက်ကုန်တွေဟာ မိသားစု များရဲ့ အသုံးစရိတ် ချွေတာနိုင်ပြီး သင့်တင့် တဲ့ အထောက် အပံ့ ရရှိစေမှာ ဖြစ်သလို တပ်မတော် တစ်ရပ်လုံးရဲ့ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍက ထွက်ကုန်များဟာ ဒေသ ထွက်ကုန်များ တိုးတက် မြင့်မားခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်မှုကို အထိုက် အလျောက် ဖြစ်စေခြင်း စတဲ့ အကျိုးများ ရရှိတာကြောင့် တပ်မတော်ရဲ့ စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေကို တိုးတက်အောင် စေတနာထားပြီး ဆောင်ရွက် ကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ အလုပ် တာဝန်တွေကို ညီညွတ်မျှတစွာ မှန်မှန်ကန်ကန် ခွဲဝေပေးခြင်း၊ စစ်သည် များ တပ်နေပျော်ရေး ကို အလေးထား ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ သက်သာ ချောင်ချိရေးကို ညီညီ မျှမျှ ရှိအောင် အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စတဲ့ ရုပ်ပိုင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နှစ်မျိုးလုံး ကို ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြင့် စစ်သည်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာများ မြင့်မားလာမှာ ဖြစ်တယ်။ စစ်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး မှာ စိတ်ဓာတ် မြင်းမားရေးဟာ အဓိက ကျတဲ့အတွက် တပ်မတော် တစ်ရပ်လုံးရဲ့ စိတ်ဓာတ် တိုးတက် မြင့်မား ခိုင်မာရေးကို အလေးထား လုပ်ဆောင်သွားကြဖို့မှာကြားလိုတယ်။ရဲဘော်တို့နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ မှာကြား လိုတာ ကတော့ နိုင်ငံတော်ကို ခေတ်သစ် စနစ်သစ်နဲ့ ချီတက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒို့ တပ်မတော်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော် တာဝန်များကို ထမ်းရွက် ကြရာမှာ (၆၇) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ဦးတည်ချက်များဖြစ်တဲ့-(က) ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ် မှုမပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာ ဏာတည် တံ့ ခိုင်မြဲရေး ဟူသော ဦးတည်ချက် များ ကို စွဲမြဲစွာခံယူစောင့်ထိန်းရေး။(ခ) နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသားရေး နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှု အခန်း ကဏ္ဍတွင် စစ်မှန်သော မျိုးချစ် စိတ်ဓာတ် ဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ဖြင့် တပ်မတော်က ပါဝင် ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး။(င) ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သည့် ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံတော် တည်ဆောက် ရာတွင် တပ်မတော်၏ အဓိက တာဝန် ဖြစ်သော ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။(ဃ) နီုင်ငံတော်၏ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် အင်အား တောင့်တင်းပြီး စွမ်းရည် ထက်မြက်သော ခေတ်မီ မျိုးချစ် တပ်မတော် တည်ဆောင်ရေး။ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်တွေနဲ့ အညီ တာဝန် ထမ်းရွက် သွားကြဖို့ မှာကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်တယ်။Myanmar Express
မြောက်ကိုရီးယားတို့ တာတိုပစ် ဒုံးကျည် နှစ်စင်း စမ်...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲဆန္ဒရှင် ခြောက်သန်းကျော်ရှိ...
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အမေရိကန်နှင့် နိုင်ငံတက...
ကြိုက်တဲ့ ပါတီကို မဲပေးနိုင်ပါသည် ၊ သို့သော်.........
Eleven Media Group သို့ ပြည်သူတစ်ဦးမှ အိတ်ဖွင့်ပေ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း အစီအစဉ်ေ...
နိုင်ငံသားအမည်ခံ ပြည်ပလုပ်ငန်းများအား လုံးဝအရေးမယူ...
အာရှ ပစိဖိတ် ဒေသကို အမေရိကန် စစ်ရေးယန္တရား ဦးစားပေ...
သူရဲကောင်းများ ထွန်းကားသည် (ကျော်သူ၊ ဇင်ဝိုင်း နှင...
အကယ်ဒမီ ပေးပွဲမှာပါ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ဒေါ်စုကြည...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် သတိပြုရမည့် တရားမဲ့ ပြုက...
မြန်မာနှင့် လာအို မဟာမဲခေါင်မြစ် ဖြတ်ကျော်ချစ်ကြည်...
ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးပျံအတွက် ပြင်ဆင...
ဆင်းမ်းကဒ် တစ်ကဒ်ကို ၂ သိန်း ကျပ် ပေးရခြင်းက ဈေြး...
သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းတွင် ၁၆နာရီကြာ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်...
လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ကျန်းမာရေး ရန်ပုံငွေအား လေးဆ ...
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်...
၆၇ နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ (ဗွီဒီယို နှင့် ဓာတ်ပုံ)...
(၆၇) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ ဓာတ်ပုံများ
တော်လှန်ရေး နေ.မှသည် တပ်မတော် နေ.ဆီသို.
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ လူငယ...
ရပ်ကွက်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးများကို လွှတ်တော်မှ အတည်ပြု...
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟို...
သူမွဲထ သစ္စာ ( လူမင်း + ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် )
ဥရောပအကြီးဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းထုတ် လုပ်ငန်...
ဗီယက်နမ် - မြန်မာ သဘောတူညီမှု စာချုပ် ၁၁ ခုရေးထိုး
မြန်မာ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာ လွှတ်တော်သမဂ္ဂ ၀င်ရန် ဆုံ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရန် ပြင်ပလေ့လာသူ ၉...
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန ပြည်...
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆ...
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အထွေ...
နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြား ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းကို ဒေသခံ ပြည်သူများ OSS စနစ်ဖြင့် အခမဲ့ ရရှိမည်
[image: နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြား ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းကို ဒေသခံ ပြည်သူများ OSS စနစ်ဖြင့် အခမဲ့ ရရှိမည်]
နေပြည်တော် မေ ၁၇ မေ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်က...